I-Pedalampenet -Ibhlog yamaKristu eqhelekileyo. Fumana yonke into kuye wonke umntu
Imoto / isithuthuthu / ikhuselo
Izipho ngoMatshi 8
Indlu kunye negadi
Indawo yokuhlala izindlu zangasese zefeliksi
Indawo yokuhlala e Brasov
Indawo yokuhlala yaseBucharest
Indawo yokuhlala eCluj
Indawo yokuhlala eConstanta
Indawo yokuhlala e Costinesti
Indawo yokuhlala ngaselwandle
Indawo yokuhlala mamaia
Indawo yokuhlala entabeni
Indawo yokuhlala e Sibiu
Iimpahla ezingabizi kakhulu
Iifoto / iikhamera zevidiyo
Iwotshi / iisongo
Zonke izithuba ezibandakanyiweyo
Ubugcisa / inkcubeko
Uluhlu lwee-30 + zokuzonwabisa ezenza imali ngo-2021
Kuthunyelwe ngu admin ngoFebruwari. Ngomhla we-4, 2021
Nalu uluhlu lwezinto zokuzonwabisa ezinokuthi zenze imali kwaye zivavanywe ngo-2021. Ezinye zezi zinto zokuzonwabisa ziye zavavanywa ndim kwaye zisebenza nge-100%. Kuyimfuneko ukuba unikezele ngeyure e-1 ngemini ukwenzela ukuba bakwazi ukwenza imali kubo ubuncinci iminyaka emi-3.
Ndifuna ishishini elisebenzela mna
Kuthunyelwe ngu admin kwi-ian. 6, 2021
"Ndibonise ukhangela kuGoogle ukukuxelela ukuba uyaphumelela" Cristi Onetiu Kwincoko phakathi kukaGeorge Buhnici noCristi Onetiu, e-IGDLCC uCristi uthe uyayifuna imbali yophando lwakho kuGoogle kwaye olu luphawu ukuba uyaphumelela Ingaba uguna ntoni. Uyayiqonda into yokuba ukuba ufuna ishishini elisebenzela wena kwaye ukuba ufuna enye into kuGoogle ngokucacileyo awuyi kuphumelela. Yimpendulo kwisiteyitimenti esithi "siyile nto siyicingayo", into esicinga ukuba ngamagama esiwafunayo kugoogle okanye kwi-intanethi, sizilinki esizilandelayo, sizincwadi esizifundayo. UCovid wasitshintsha kakhulu. Uninzi lwabantu luphulukene nemisebenzi, ukuzikhetha bodwa emakhayeni abo ... Kufuneka siziqhelanise neemfuno ezintsha. Kufuneka sicele into eyahluke kwaphela kwindalo iphela. Sinako ukujonga kwikamva, sijonge kwaye sithathe imiba yexesha elidlulileyo. Kufuneka sibone okubalulekileyo kwaye kubalulekile kwikamva. Kubonakala ngathi ubomi beats bhanyabhanya kunye ne-sci-fi sele iyinyani kwinqanaba elithile. Ukujonga kwikamva kwi-2020 akufuneki kusoyikise. Umsebenzi akufuneki ukuba singene ngequbuliso kwinkqubo yeeyure eziyi-8 kwaye ke siyathatha umhlala-phantsi. Kuya kufuneka sizibone siluncedo kubo bonke ubomi bethu kwaye siphupha ngeenjongo zokuba besebancinci
Ngaba ufuna iikhosi zophuhliso lomntu?
Kuthunyelwe ngu UPaul Gavris kwi-ian. 5, 2021
Molweni zihlobo! Ndihleli ndicinga engqondweni yam kwezi ntsuku: "Ngaba siyazidinga iikhosi zophuhliso lomntu?", Kwaye ukuba kunjalo, "Sazi njani ukuba loluphi uhlobo lwezifundo olulungele thina?" Imisebenzi yophuhliso lomntu. Yintoni inkqubo yophuhliso? Yeyakho kwaye isebenza njani kuwe? Zeziphi iindlela zokwenza buqu kwaye ungazisebenzisa njani?
Themba ingcinga yeshishini
Kuthunyelwe ngu admin kwi-ian. 5, 2021
Ubume bendalo businika imibono emininzi yeshishini eyimpumelelo. Njengentaka engaweli emlenzeni kuba iwathembile amaphiko ayo hayi umlenze wayo, usomashishini kufuneka athembele kwimbono yakhe yeshishini. Ukuba ubuza uluvo lwakho lweshishini ukuba uthi uyakusishiya isicwangciso ukuba asisebenzi ngomhla x, uyazikhohlisa ukuba uya kuphumelela. Ukufumana impumelelo ...
Posts zakutsha ezivela zonke iindidi
Iingcango zangaphakathi zomthi zilungele ikhaya
apr. 8Kuthunyelwe ngu UAlina Ileana in Indlu kunye negadi
Iingcango zezinto ezichaza indlu. Nokuba ngocango lwangaphakathi okanye ...
Isikolo i-Sureanu ski siza kukufundisa ukuskiya ngokugqibeleleyo
apr. 8Kuthunyelwe ngu UAlina Ileana in Impilo, umdlalo
Siliqela labaqeqeshi beSkianu abaqeqeshiweyo. Singo ...
Konke malunga ne-periodontitis
apr. 8Kuthunyelwe ngu UAlina Ileana in Impilo
Isifo sePeriodontal sikwabizwa ngokuba yi-periodontitis Le periodontitis yi ...
I-Dacia Spring VS BMW i3 .Iimoto ezimbini ezifanelekileyo zombane
apr. 8Kuthunyelwe ngu UAlina Ileana in Imoto / isithuthuthu / ikhuselo
Iimoto ziye zavela kakhulu kule minyaka idlulileyo. Baqala ukuthandwa ...
Iingcingo ezifanelekileyo kakhulu zezekhonkrithi
Ucingo olubambekayo lolona lusebenzayo kodwa lolona luxhathisa kakhulu ...
Uluqinisekisa njani ukhuseleko lwakho emsebenzini nezixhobo ezifanelekileyo
apr. 1Kuthunyelwe ngu UAlina Ileana in Iinkonzo
Ukukhuselwa emsebenzini kuqinisekiswa ziimeko ezifanelekileyo zokusebenza ...
Fumanisa iiphakheji zokufaka ozifunayo
Ukupakishwa okufanelekileyo kufuneka kugcine imveliso yakho ihambile ...
Iifomsile zekofu zihlala zifunwa emva
Umart. 31Kuthunyelwe ngu UAlina Ileana in ukutya
Usuku oluhle luqala ngekofu elungileyo. Ikofu inika amandla ongezelelweyo kusuku ...
Ukutya kwenja kufuneka kube neeprotein ezininzi
Inja ngumhlobo osenyongweni womntu. Ngabo kuphela abakwaziyo ...
KwiBeKid.ro ndiya kuhlala ndizonwabela izihlalo ezifanelekileyo zemoto zomntwana wam
Umart. 31Kuthunyelwe ngu UAlina Ileana in ifashoni
Izihlalo zeemoto zezona zifanelekileyo xa ufuna ukuhamba ne ...
Ulayishe ezinye izithuba
Umfoti womtshato uCluj
Konke malunga neebhayisikile
Indawo egcinwe ngu:
Yiba ngumbhali kwindawo leyo
Ababhali bethu abaPhezulu
admin la Ngaba unayo into oyithandayo? yenze imali ngayo, ndikufundisa mahala
Simona la Ngaba unayo into oyithandayo? yenze imali ngayo, ndikufundisa mahala
Ionut la Iifomsile zekofu zihlala zifunwa emva
Vivien la Uluqinisekisa njani ukhuseleko lwakho emsebenzini nezixhobo ezifanelekileyo
اسکیت la Uluqinisekisa njani ukhuseleko lwakho emsebenzini nezixhobo ezifanelekileyo
Lawrence la Uluqinisekisa njani ukhuseleko lwakho emsebenzini nezixhobo ezifanelekileyo
Ubungakanani: la Uluqinisekisa njani ukhuseleko lwakho emsebenzini nezixhobo ezifanelekileyo
UBogdan la Nikezela ngentengiso ye-SEO yasimahla
Ikhalenda yeOthodoki 2021
Ukuqeshwa kokutya kweBolt
Ulawulo: Cristian S
zoqhagamshelwano Ukudibanisa uCristian
Idilesi: ICluj-Napoca 400423 RO
Yayilwa eziphambili Izihloko | Ixhaswa ngu WordPress